Misy horonan-tsary mampiseho antsika ny sarimiaina hita rehefa mampifandray ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Apple dia nikarakara ny antsipiriany kely indrindra amin'ny Apple Watch, satria ny marika famantaranandro tena lehibe ihany no mahavita, ary tonga amin'ny fotoana hoe rehefa mampifandray ny Apple Watch voalohany amin'ny iPhone isika dia hampiseho amintsika ny "Certificate of Fanamarinana "toy ny iray izay miseho amin'ny sary. Na dia mbola tsy amidy aza izy ireo dia efa vitany ny mamerina an'ity dingana ity eo amin'ny iPhone sy ny Apple Watch, ary tsy nampiseho taminay ny taratasy fanamarinana ihany koa izy ireo fa afaka mahita ny sarimiaina izay hiseho amin'ny iPhone isika rehefa mampifandray azy ireo isika. Manana ny horonantsary mampiseho ny sarimiaina etsy ambany ianao.
Araka ny hitanao amin'ny horonantsary, ny maodely Apple Watch dia samy hanana ny mavitrika manokana, mampiseho amin'ny farany ny sarin'ny lohateny fa misy ny toetr'ilay maodely (fitaovana, habe, karazana fitaratra, sns.) Ny sary dia mitovy amin'ny iray izay hita eo aorin'io famantaranandro io ihany, manodidina ny sensor ny mitovy ary izay rakotra kristaly safira.
Ny dingana fampiroboroboana Apple Watch dia azo atao mampiasa ny fakan-tsary any aoriana an'ny iPhone ary ny fampiharana natokana ho an'ny famantaranandro, izay manana anarana mitovy, «Apple Watch». Azontsika atao koa ny manampy azy ho azy, miditra ny angon-drakitra izay ho azontsika amin'ny fipihana ny "i" izay miseho eo amin'ny efijery amin'ny smartwatch. Ny fampiharana dia raikitra ihany koa amin'ny fotoana ampiarahanay azy, miarahaba antsika "Salama maraina", "Salama tolakandro" ary "Salama hariva" raha ilaina izany. Ity fampiharana ity dia hita ao amin'ny iOS 8.2 sy amin'ny betas farany an'ny iOS 8.3. Izy io koa dia manana fizarana natokana ho an'ny rindranasa ho an'ny Apple Watch, fa amin'izao fotoana izao dia tsy mampiseho mihoatra noho ny fampahalalana fotsiny momba ny Apple Watch. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mahita afa-tsy ireo horonantsary ampidirin'i Apple ao amin'ny tranonkala natokana ho an'ny Apple Watch izahay, ary hahazo vaovao misimisy kokoa momba ny famantaranandron'i Apple amin'ny alàlan'ny rohy mankamin'ny tranokalan'ny orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Mampiseho amintsika ny sary mihetsika hita maso ny video rehefa mampifandray ny Apple Watch
Tonga hijanona ve i Periscope sa lamaody?
Hexaclock manokana ny famantaranandro fanidiana hidy